Min Khant x Vestige Embroidered Sleeve Front-Zipped Hoodie – Grey/Red | Buy online | SHOP.COM.MM
Min Khant x Vestige Embroidered Sleeve Front-Zipped Hoodie – Grey/Red
စတိုင်အရမ်းကျပါတယ်။ အသားလည်းကောင်းပြီး ဝတ်ရတာလည်း ကောင်းပါတယ်။ Read more Hide
cutting အရမ်းကောင်းတဲ့ အနွေးထည်လေးပါ။ ဒီဇိုင်းမိုက်မိုက်လေးတွေကို ကြိုက်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ Read more Hide
Very cozy, durable, large pockets, great collar and hood. All in all,aworthy purchase from Vestige. Read more Hide
ပြည်တွင်းဖြစ်ဆိုပေမဲ့ ဒီဇိုင်းလည်းသွက် အရည်အသွေးလည်းကောင်းတယ်။ Vestige က တစ်ထည်ဝယ်ဖူးတော့ သူ့ကွာလတီအကြောင်းသိတယ်။ မီးခိုးရောင်ဗြောင်လေးက မိုက်မှမိုက်။ Read more Hide
It isafront-zipped hoodie with the embroidered sleeve.
Specifications of Embroidered Sleeve Front-Zipped Hoodie – Grey/Red